सोधिने प्रश्न - डोङ्गुवान Zhantuo ओप्टिकल लेन्स कं, लिमिटेड
उत्पादन सूचना बारेमा
जो उत्पादनहरु तपाईं उत्पादन?
हाम्रो मुख्य अप्टिकल उत्पादनहरु गोलाकार र गैर गोलाकार लेन्स, VR 3D लेन्स, एलईडी लेन्स, पारदर्शी एक्रिलिक उत्पादनहरु को सबै प्रकार छन् ( कला काम, घरेलू र होटल आपूर्ति, स्टेशनरी, दैनिक प्रयोगको लेख, आदि ) , हड प्रक्षेपण लेन्स, सुरक्षा हेलमेट visors, खेल लेन्स (स्की गगल्सहरू लेन्स, पौडी लेन्स, साइकल दौड लेन्स), चस्मा लेन्स, औद्योगिक सुरक्षा लेन्स, विभिन्न विशेष आकारको बाङ्गो सतह लेंस, प्लास्टिक उत्पादन, र सामूहिक मात्रा।
तपाईं OEM उत्पादन प्रदान गर्न सक्छ?
हो हामी सक्छौ। हामी ग्राहकहरु 'रेखाचित्र वा नमूनाहरू अनुसार एकीकृत सेवाहरूको मोल्ड निर्माण, उत्पादन र प्रशोधन गर्न सक्नुहुन्छ।
चाहे तपाईं हामीलाई लागि डिजाइन गर्न सकिन्छ?
निश्चित, तपाईं हामीलाई आफ्नो विचार र सम्बन्धित मापदण्डहरू प्रदान भने, हामी व्यवस्था गर्नेछन् र तपाईंको पुष्टि लागि डिजाइन पर्खाइ पूरा कागजात। आदेश गर्नु अघि हामीले डिजाइन शुल्क, तर आम उत्पादन समयमा, हामी तपाईंको डिजाइन लागत फिर्ता हुनेछ।
जो शिल्प हामी उत्पादन मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
बलियो: स्क्राच देखि उत्पादन रोकथाम गर्न, लगाउने, र विरोधी प्रभाव
रंगाई: कच्चा माल मा रोगन थप्नुहोस् फरक रंग संग उत्पादन बनाउन
विद्युत: को ढाल रंग, जल चाँदी रंग, उत्पादन multicolored रंग , नमूना चढाना, आदि सुन्दर सतह प्रभाव लागि।
कोटिंग: उत्पादन सतह मा, अप्टिकल पातलो फिलिम र निर्वात प्रविधि प्रयोग विरोधी यूवी फिलिम, AR फिलिम, विरोधी औंठाछाप फिलिम, आदि चढाना
नमूना शुल्क र वितरण बारे के?
नमूना शुल्क विशिष्ट उत्पादन अनुसार, यो ठूलो उत्पादन हो भने, हामी नमूना संस्करण शुल्क लागि उत्पादन को लागत मा फर्कन सक्नुहुन्छ।
payed नमूना संस्करण शुल्क पछि, ग्राहक एक पुष्टि फाइल / इमेल, हामीलाई पठाउँछ उत्पादन को जटिलता अनुसार, हामी प्रयोगात्मक मर र समय प्रमाणीकरण को अवधि मूल्याङ्कन। नमूना संस्करण वितरण510 दिन सामान्यतः छ। तपाईं गुणस्तर पुष्टि गर्न सूची नमूना आवश्यक छ भने, हामी तपाईंलाई बस यातायात खर्च भुक्तानी आवश्यक तपाईं मुक्त लागि नमूना प्रदान गर्न सक्छन्।
टीएनटी द्वारा नमूनाहरू पठाएर , यूपीएस , FedEx , डीएचएल एक्सप्रेस।
लागि सबै उत्पादनहरु देखाए तपाईं मोल्ड छ?
वेबसाइटमा तस्वीर, कारखाना द्वारा उत्पादित गर्दै छन् तपाईंलाई थाहा थप विवरण कृपया हाम्रो विक्रेता सोध्न चाहनुहुन्छ भने मात्र, एउटा सन्दर्भ रूपमा प्रस्ताव राखे।
को मोल्ड उत्पादन अवधि कसरी लामो छ?
को मोल्ड गुहा नम्बर आकलन र मोल्ड नम्बर प्रतिलिपि गर्न आदेश र ग्राहकहरु को आवश्यकताहरु अनुसार, सुरुका मोल्ड समय र समाप्त समय एक सेट निर्धारण आकार र उत्पादन को जटिलता अनुसार। नमूना निर्धारण वा 20-30 दिनको लागि सामान्य मोल्ड विनिर्माण चक्र चित्रकला पछि।
को MOQ के हो?
न्यूनतम आदेश मात्रा 3K छ, हामी पनि जटिल आदेश सानो मात्रा स्वागत, तर मूल्य उच्च हुनेछ। को आदेश विशाल हुनुहुन्छ भने, हामी अनुकूल कच्चा माल मूल्यहरु प्राप्त गर्न सक्छन् र व्यवस्थापन लागत घटाउन, त्यसैले हामी सस्ता मूल्य प्रदान गर्न सक्छन्।
अर्डर मोल्ड, अवधि, अर्डर मात्रा र व्यवस्था, सामान्य अनुसार हामी हुनेछ वितरण 20 दिन भित्रमा mold.Delivery उत्पादनहरु बनाउन पछि उत्पादनहरु। हाम्रो सबै भन्दा राम्रो रेकर्ड VR लेन्स लागि 1day भित्र 50000 छ
तपाईँको वितरण तरिका के हो?
साधारण EXW, एफओबी, सीआईएफ, आदि
आफ्नो प्रमाणपत्र के?
ISO9001, एसजीएस परीक्षण रिपोर्ट र थप, जो निश्चित सबै उत्पादनहरु उत्पादन प्रगति सजिलै बनाउन।
हामी Alibaba द्वारा प्रदान नयाँ सेवा हो जो Alibaba व्यापार आश्वासन को सदस्य छन्, आपूर्तिकर्ता अर्डर वितरण र उत्पादन गुणस्तर सन्दर्भमा आफ्नो दायित्व पूरा सुनिश्चित गर्न आपूर्तिकर्ता गर्न खरीदार भुक्तान रक्षा। तपाईं alibaba मा भुक्तानी द्वारा तिर्न वा PayPal प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ठूलो सामान हामी टी / टी 30% जम्मा भुक्तानी, बीएल को प्रतिलिपि विरुद्ध भुक्तानी शेष अपनाउने।
द ढुवानी सूचना बारेमा
हामी हाम्रो आफ्नै ढुवानी एजेन्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
हो तिमि सक्छौ। हामी धेरै अग्रेषकों साथ थियो। तपाईं आवश्यक छ भने, हामी तपाईँलाई केही अग्रेषकों सिफारिश गर्न सक्छन् र तपाईं मूल्यहरु र सेवाहरू तुलना गर्न सक्नुहुन्छ।
ढुवानी हाम्रो पोर्ट?
HuMen / शेन्जेन / हङकङ
म निकटतम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा घरेलू विमानस्थल छ कुन आफ्नो कारखाना भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने?
शेन्जेन Bao'an अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा निकटतम हवाई Guangzhou- Baiyun अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा एक सानो टाढा छ। कृपया हामी तपाईंलाई टिप्न चालक व्यवस्था हुनेछ, आफ्नो भ्रमण अघि हामीलाई भन्नुहोस्।
आदेश प्रक्रिया बारे
1, पूछताछ-व्यावसायिक उद्धरण
2, मूल्य, नेतृत्व समय, कलाकृति, भुक्तान अवधि पुष्टि आदि
3, बिक्री छाप संग प्रोफोर्मा चलानी पठाउनुहोस्।
4, ग्राहक जम्मा वा नमूना शुल्क लागि भुक्तानी र हामीलाई बैंक रसिद पठाउनुहोस्।
हामी भुक्तानी मिल्यो कि ग्राहकहरु 5, प्रारम्भिक उत्पादन स्टेज-बजेट, अनि तपाईंको अनुरोध अनुसार नमूना बनाउन हुनेछ, आफ्नो अनुमोदन प्राप्त गर्न तस्बिरहरू वा नमूनाहरू पठाउनुहोस्। अनुमोदन पछि हामीले उत्पादन व्यवस्था हुनेछ सूचित र अनुमानित समय सूचित।
6, मध्य उत्पादन-पठाउन उत्पादन लाइन जो तपाईंलाई आफ्नो उत्पादनहरु देख्न सक्नुहुन्छ देखाउन फोटो। फेरि अनुमानित वितरण समय निश्चित गर्नुहोस्।
7, अन्त उत्पादन-मास उत्पादन उत्पादनहरु फोटो र नमूनाहरू तपाईं पनि तेस्रो पक्ष निरीक्षण व्यवस्था गर्न सकिन्छ, अनुमोदन लागि पठाउन हुनेछ।
8, ग्राहक ब्यालेन्स लागि भुक्तानी र हामी ढुवानी सामान व्यवस्था।
9, आदेश तपाईं सामान प्राप्त गर्दा "समाप्त" भन्न र तिनीहरूलाई पूरा गर्न सकिन्छ।
गुणस्तर, सेवा, बजार प्रतिक्रिया हामीलाई प्रतिक्रिया र सुझाव। र हामी राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी एक निर्माण गर्दै छन्। हामी पूर्ण मोल्ड र स्वचालित उत्पादन उपकरण छ, यो हामी बाहिर समयनिष्ठ वितरण लागि उत्पादन तालिका बोक्न गर्ने क्षमता सुनिश्चित गर्दछ।
10 वर्ष अनुभव
हामी यो उद्योग मा 10 वर्ष अनुभव भन्दा छ। त्यो हामी आदेश र उत्पादन को लागि समस्या पूर्वावलोकन गर्न सक्छ। त्यसैले, यो खराब अवस्था जोखिम हुन deduce निश्चित हुनेछ।
सेवा दर्शाउन दर्शाउन
त्यहाँ एक बिक्री प्रतिनिधित्व गर्ने बाहिर पठाइएको उत्पादनहरु जांच तपाईंले सेवा गर्नेछन् छ। प्रक्रिया समयमा, तपाईं बस सबै समस्याको लागि उसलाई छलफल गर्न आवश्यक र बाटो धेरै समय बचाउँछ।
प्रत्येक आदेश लागि, सख्त निरीक्षण गर्ने QC विभाग द्वारा गरिनेछ ढुवानी अघि। खराब गुणस्तर र अवस्था ढोका भित्र बचा गरिनेछ।
88th, Xin'an सडक, HuMen टाउन, Dongguan, गुआंग्डोंग, चीन